Archive du 20170710
Marc Ravalomanana « Tsy hihemotra mihitsy aho »
Natomboka tao amin’ny hotely Carlton Anosy ny fanamarihana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako i Madagasikara ny sabotsy 8 jolay lasa teo.
GETM Asan’i Satana ny demokrasia
Nihetsika indray ny GETM na ny « Groupement pour l’Edification de la Théocratie à Madagacar » tarihin’Atoa Raharimala Andriampenomanana ka nanao antso avo ho an’ny filoham-pirenena Malagasy,
Gérard Ramamimampionona “Tokony ho mpindram-pahefana no iantsoana ny mpitondra”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny mpandinika raharaham-pirenena Gérard Ramamimampionona manoloana ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny.
Fanambaram-pananana Mbola tsy nahavita ny 26 % n’ireo olom-boafidy
Hifarana ny 15 jolay ho avy izao ny hanaovan’ireo olom-boafidy sy tompon’andraiki-panjakana eto amin’ny tany sy ny firenena ny fanambaram-pananana eo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Carrefour de la formation des metiers et de l’emploi Hetsika hanampiana ireo mpianatra sy mpitady asa
Raikitra ny « Carrefour de la formation des métiers et de l’emploi » karakarain’ny Alliance Française eto Antananarivo.
Sekoly ambony UPRIM Hiitatra hatrany Kaomoro
Tontosa soa aman-tsara ny sabotsy teo teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka ny fankalazana ny fahafolo taona niorenan’ny sekoly ambony UPRIM.
Faribolana fanilo Hankalaza ny kolontsaim-pirenena
Tao anatin’ny 1 volana mahery kely izao no nisian’ny hetsika “Dinika hariva” izay karakarain’ny fikambanana ara-kolontsaina “Faribolana fanilo” etsy amin’ny Trass Tsiadana isaky ny alarobia voalohan’ny volana.
Sendra ny tompon-trano nahay azy Voafiran’ny antsy ny tanan’ilay malaso
Hatramin’ny ora nanoratana ity lahatsoratra ity, raha ny tati-baovao voaray farany, dia mbola eo am-pikarohana an’ity dahalo tompon-tanàna tapaka sy ireo malaso namany ny zandary sy ny fokonolona any an-toerana.
Nirehitra ny toerana fitehirizana fanamafisam-peo an’ny tarika Rossy tetsy amin’ny kianjan’ny Kanto.